Filankevitra mpanatanteraka: Tsy misy tranga mavitrika na ahiahiana COVID-19 any Anguilla
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Anguilla Travel News » Filankevitra mpanatanteraka: Tsy misy tranga mavitrika na ahiahiana COVID-19 any Anguilla
Nivory ny filankevitra ambony an'ny Anguilla ny 24 Jolay mba handinika ny raharaha mifandraika amin'izany Covid-19 any Anguilla. Ny governora IZY Tim Foy sy ny Hon. Ny praiminisitra Dr. Ellis Webster dia namoaka ity fanambarana manaraka ity tamin'ny 25 Jolay 2020.
Tranga / tranga ahiahiana - Tsy misy tranga mihetsika na ahiahiana COVID-19 any Anguilla.
Fanakatonana ny sisin-tany - Hatramin'ny 31 Jolay, ireto sokajy na olona manaraka ireto dia avela hiditra sy handao an'i Anguilla azo ekena:
· Vonjy taitra sy famindra toerana;
· Ireo olona maniry hiala an'i Anguilla;
· Fampodiana ireo Anguiliana avy amin'ny firenena sy faritany misy tranganà mavitrika
latsaky ny 0.2% ny mponina, izay tsy maintsy manaraka ny kaonty rehetra mifandraika amin'izany
ary ny fitsipiky ny quarantine;
· Ireo mpitsidika avy amin'ny firenena sy faritany manana tranga mavitrika ambany noho ny 0.2% amin'ny
mponina, izay tsy maintsy manaraka ny kaonty rehetra mifandraika amin'izany ary ny fitsipiky ny quarantine.
Miorina amin'ny toe-javatra misy ankehitriny, ny sisin-tany dia hikatona ho an'ny hetsika mpandeha ara-barotra mahazatra hatramin'ny 31 Oktobra farafaharatsiny.
Fiverenana an-tanindrazana - Miorina amin'ny toe-draharaha COVID-19 mivoatra haingana manerantany, indrindra ny fitomboan'ny tranga any Amerika, ny Executive Council dia nanitatra ny fampiatoana ny fampodiana an-tanindrazana avy amin'ny firenena sy ny faritany miaraka amin'ny tranga mavitrika mihoatra ny 0.2%. Ity fampiatoana ity dia mandaitra avy hatrany ary hijanona eo amin'ny toerany hatramin'ny faha-7 aogositra faran'ny voalohany.
Milalao ny anjaranao - Ny dingana efa nataontsika rehetra dia manampy amin'ny fiarovana antsika. Tsy misy tranga mavitrika izay midika fa tokony hatsahantsika ny fomba fidiovana na ny fitsipiky ny taovam-pisefoana. Koa manentana indray ny Anguillians rehetra izahay mba handray ny dingana tsotra hamonjy aina:
· Sasao matetika ny tananao
· Sarony ny kohaka sy mievina amin'ny tavy azo ovaina, na amin'ny kitrokely amin'ny kiho mihetsiketsika
· Madio matetika ary mamindra toerana sy faritra iasana, ary
· Aza mifanerasera amin'ny olona tratry ny aretina na mipoitra soritr'aretina mahery vaika toy ny gripa, kohaka ary sery
Ny Ministeran'ny Fahasalamana dia nametraka laharana roa COVID_19: 1-264-476-7627 (476-SOAP) ary 1-264-584- 4263 (584-HAND).
Misokatra any Etazonia indray i St. Maarten amin'ny 1 Aogositra miaraka amin'ny protokolota henjana